Free Ụgbọ oloko a Summer N'ihi Teenagers | Save A Train
Home > Travel Europe > Free Ụgbọ oloko a Summer N'ihi Teenagers
Na mbụ, a ga-enwe free ụgbọ oloko maka ruo 30,000 na-eto eto nke a n'oge okpomọkụ. The ọnụ ọgụgụ nke free tiketi pụrụ ọbụna na-abawanye na-adabere na ina. The EU Ọzọkwa mara ọkwa na ọ ga-eme ka na-enye dị ka afọ iri na ụma agadi 18 na tọrọ. N'ihi na ọnụ ọgụgụ nke free gbaa ụgbọ okporo ígwè, ndị na-eri maka EU nwere ike gafere 12 nde pound.
EU àjà free ụgbọ oloko a n'oge okpomọkụ.
Gịnị na-enye pụọ free ụgbọ oloko tiketi?
na 1972 n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Europe jupụtara na-eto eto na okpomọkụ. n'ihi na flights ndị ka dị nnọọ oké ọnụ n'oge a, $38 maka a ụgbọ okporo ígwè ngafe gafee Europe yiri mara mma. Ọzọkwa, n'abalị ụgbọ oloko mere na ulo bụ nnọọ oké ọnụ. Ọzọkwa, ụgbọ okporo ígwè gafee gụnyere niile Western Europe. na 1998 ụgbọ okporo ígwè gafee nke ruo mgbe ahụ bụ nanị dị ka ndị mmadụ n'okpuru 26 ama afọ ịgba wepụrụ. Interrailing adịkwaghị ewu ewu, na mba malitere depụta ọnụahịa nke ndị njem nleta na-eji ọrụ ụgbọ oloko ha. Ọzọkwa, ọnụ ala flights ghọrọ dị nnoo na-ahapụ interrailing dị ka ihe dị oké ọnụ na adighi ike ụzọ njem Europe. Ugbu a European nzuko omeiwu ekpebiela na ọ chọrọ ịchị interrailing dị ka nhọrọ ndị ama ama maka ndị nọ n'afọ iri na ụma ma ekenyela ha 12 nde pound maka oru ngo.
Olee otú ime n'ihi na free ụgbọ oloko
Iji na-etinye maka otu n'ime free tiketi, mkpa ka ị n'okpuru gị ngwa ka European Youth Portal na June. A juri ga mgbe igbunye 15,000 free gbaa ụgbọ okporo ígwè. Mgbe nke abụọ set of 15,000 tiketi e zubere ya ga-abụrịrị dabere na mmefu ego na nzaghachi si akpa 15,000 sonyere. The kpọmkwem ụbọchị maka n'ido ga n'etiti June 12 na June 26. Ị ndị rurula na-etinye maka a tiketi ma ọ bụrụ na ị ga- 18 afọ on July 1st. 1900 ndị a free ụgbọ oloko tiketi ga-ekenyela British ịbata. N'otu aka ahụ, France na Germany ga-enweta 1900 tiketi. Na ntule ndịiche, Irish ịbata ga naanị enweta 140 tiketi.
Prague na Berlin Ụgbọ oloko
Iji-atụle n'etiti ndị kasị mma ngwa maka free ụgbọ oloko gị mkpa iji gosi na ndị na-esonụ;
Firstly, gị mkpali nleta dịkarịa ala otu European Cultural Heritage saịtị. Ọzọkwa, ị ga-mkpa-aza a zaa banyere European Cultural Heritage saịtị. Ajụjụ a ga-agụnye ajụjụ gbasara ntuli aka nke ndị ntorobịa na ndị omeiwu Europe.
Ọzọkwa, ị ga-mkpa iji gosi na a ọchịchọ ịghọ a DiscoverEU nnochite anya. Ọchịchọ a kwesịrị ịgụnye akuko gị njem ahụmahụ na na-eme ka gị photos dị ka DiscoverEU ncheta foto ngosi na Europe nzuko omeiwu.
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon ruo Nice ụgbọ oloko
AKWỤKWỌ dị ọnụ ala dị gbaa ụgbọ okporo ígwè na anyị
N'ihi na anyị maara na ị na-achọ ndị kasị mma price ma ọ bụrụ na ị ga-esi free ụgbọ oloko tiketi, anyị nyere a ngwa ngwa search engine chọta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa. Anyị chọrọ ka ị na-eme njem ọzọ na-akwụ obere. Ịzụ gbaa ụgbọ okporo ígwè iji ọtụtụ ugwo nhọrọ tinyere E Si Nweta Kaadị, PayPal, na Alipay. Ma ị na-achọ mara mma, ezigbo nri, ihunanya njem ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ihe na-aga Europe, anyị nwere ike inye gị ndị kasị mma tiketi.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-trains-summer-teens%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#free #freetrains ụgbọ okporo ígwè tiketi ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ